Shir muddo ka socday degmada Widh-widh ee gobolka Cayn oo qodobbo laga soo saaray. – Radio Daljir
Shir muddo ka socday degmada Widh-widh ee gobolka Cayn oo qodobbo laga soo saaray.
Widh-widh, June, 27 – Degmada widh-widh oo ah degmada labaad ee gobolka cayn ayaa waxaa mudo todobaad ah ka socday shir ay isugu yimaadeen qarka mid ah dadka deegaanka iyo masuuliyiin ka socota maamulka soomaaliland oo uu hogaaminaayo warsiirka xanaanada xoolaha ee soomaaliland.
dhinaca degmada waxaa shirkaasi goob joog ka ahaa kayse cabdi yuusuf iyo xubno kale oo uu ka mid yahay gudoomiyhii golaha khusuusiga SSC Cabdirisaaq xasan Ismaaciil iyo xubno kale.
Shirkaas oo maalmihii u danbeeyey ka socday degmada widh-widh ayaa waxaa lasoo gababaeeyey maalintii shalay waxana lagasoo saaray qodobo dhowr ah oo ay wada
saxeeyeen labada dhinac oo shirka isugu yimidshirka ayaa waxaa kasoo baxay qodobo ka kooban ilaa 8- qodob oo ay wada sexeexeen labada dhinac waxay u qornayeen sidan.
1-Shirweynaha Nabadda waxa la isla gartay Nabad iyo midnimo waarta oo dhex marta SSC, Dhulbahante iyo maamulka Somaliland.
4- Shirka nabadda waxa la isla gartay in la sii daayo maxaabiista dagaal ee SSC isla markaana maxaabiista kale ee loo haysto dambiyada gaarka ah la horkeeno Garsoor lagu wada kalsoon yahay sida ugu dhakhsaha badan.
5- Shirka waxa la isla qaatay in la joojiyo dhul qodista iyo Degaan durugsiga aan la isla ogolayn.
7- Shirka Nabadda ee Widh-widh waxa la isla qaatay in ahmiyad weyn la siiyo Horumarinta deegaamada Dhulbahante oo dib u dhac badani ka muuqdo si loo gaadhsiiyo gobolada kale ee dalka, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka,biyaha iyo wixii la mid ah.
8- Shirka Nabada waxa la isla qaatay in si kama dambays ah loo qaato gogol nabadeed oo ay ka soo qeyb galaan SSC iyo dhulbahante inta shirka ka maqani.
Intaska oo shirkaasi qodobo laga soo saaray hadana waxaan shirkaasi goobjoog ka ahayn masuuliyiintii dhinaca dhaqanka ahayd,Garaad abshir saalax oo ah isagu garaadka beesha degta degmada widh-widh ayaan meesha joogin horana u cambaareeyey shirkaasi.
Sidoo kale waxaa shirkaasi cambaareeyey Cuqaasha iyo waxgaradka gobolka cayn.